Claudio Marchisio Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts
Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola lase-Italy Claudio Marchiso Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza indaba ephelele yebhola le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso "Inkosana encane". I-Claudio Marchisio Ingane Yethu Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthembeka kwakhe kuJuventus FC kodwa abambalwa abheka uBoodio Marchisio's Bio okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Claudio Marchisio Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
UClaudio Marchisio wazalelwa ngosuku lwe-19th lukaJanuwari 1986 eTurin, e-Italy. Wazalelwa ngubaba uStefano Marchisio (ibhizinisi) kanye nonina, u-Anna Zimmardi (owasiza umyeni wakhe ekusebenzeni ibhizinisi lakhe).
Ukukhula eTurin osemncane uClaudio bekubandakanyeka kakhulu eBhola. Uthando lwakhe lomdlalo lungacatshangwa njengelungelo lomndeni ngenxa yokuthi umndeni wakhe wonke wabaxhasa abalandeli bakaJuventus FC
Kungokwemvelo ukuthi abazali bakaClaudio basekela uJuventus FC kuye njengoba engazange abe ngumbukeli ngaso sonke isikhathi emidlalweni, (ngenxa yamathikithi enkathi athole abazali bakhe) futhi kamuva waba umfana we-ball kuDelle Alpi Inkundla yezemidlalo eTurin.
Claudio Marchisio Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Umsebenzi we-Buildup
Njengoba iwayini lidla kangcono ngo-Age, isithakazelo sikaClaudio ku-football sagxila kakhulu ngesikhathi, intuthuko eyabangela ukubhaliswa kwakhe eqenjini lezemidlalo le-Fiat's satellite, manje eyaziwa ngokuthi uSisport. Kwakuyi-sisport ukuthi uCladio ubeke imidwebo emihle ebambe iqhaza labadlali abavela kuJuventus owamthola indawo eqenjini leqembu lesikhathi esisha lapho ekhulile.
Ngesikhathi uClaudio ethatha isifiso sakhe sokudlalwa kwebhola e-Juventus Youth club, wakwazi ukwenza kahle ezikoleni futhi akasoze wafika lapho edingeka khona acabangele ukuthola amakhono okuqeqeshwa njengoSomlomo uma engatholi ukudlala ibhola ithimba lokuqala leqembu.
Kodwa-ke, ukwesaba kwakhe akuzange kwenzeke njengomqeqeshi weJuventus ngaleso sikhathi, uFabio Capello wamnika izizathu zokugcina ithemba lakhe liphila ngokusebenzisa uchungechunge lwezingcingo zokuqeqesha iqembu lokuqala leqembu ngesikhathi se-2004-2005.
Claudio Marchisio Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
Ngemuva kocwaningo lokuqeqeshwa neqembu lokuqala leJuventus, uClaudio wanikezwa inombolo yesikwele futhi wafaka engxenyeni yabangani be-preseason. Ngemva kwalokho, wakhuthazwa waba yiqembu le-Juventus First futhi wanikeza inombolo ye-15 Jersey.
Ukukhushulwa kukaClaudio kwaletha izindaba ezinhle njengoba umsebenzi wakhe wahamba ngaphandle kodwa phezulu. Imizamo elandelayo yambona ebolekele ukusiza u-Empoli ukuba agweme ukuxoshwa kanye nokubuyela kuJuventus efomini eliphezulu ukuze asize ohlangothini lwakhe lwe-2008-2009.
Imidlalo yakhe emnandi ibambe iqhaza labadlali abaningi kuhlanganise no-Fiorentina, uStefano Borgonovo owabhala umbono wakhe ngoClaudius Marchisio ephepheni lezemidlalo. Lathi:
"UMarchisio unakho konke okudingeka adlale ezingeni eliphakeme ... [Unobuntu], ungikhumbuza uMarco Tardelli omkhulu."
Claudio Marchisio Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ngomdlali obonakala ebaluleke kakhulu eqenjini lakhe kanye neqembu lesizwe, uMarchisio wathatha isikhathi emakhakheni akhe ebhola ematasa ekwakheni ubuhlobo obuhle obubangelwa uMshado.
Ikhono lebhola lihlangana nomkakhe, uRoberta Sinopoli ku-2006 esikhungweni sezokwelapha lapho efuna ukuphulukiswa khona ekulimazeni. Ngokwe-interview eyanikezwa nguClaudio e-2007, umhlangano wabo wawuthando, ekutholeni kuqala, wanezela ukuthi ubudlelwane babo bufinyelele ekugcineni ukuthi wayengacabangi ukuhlala ngaphandle kwakhe.
Akubanga isikhathi eside ngaphambi kokuba bathuthele ndawonye futhi babophe i-Knot ndawonye ngoJuni 2008.
Lo mbhangqwana usuhlale ushada kusukela ngaleso sikhathi futhi umshado wabo ubusiswe ngamadodana amabili; UDavid wazalwa ngo-Agasti 2009 no-Leonardo bazalwa ngo-March 2012.
Ukuze abonise ubukhulu bothando analo ngomkakhe, uMarchisio unomkakhe wesuku lokuzalwa odweba ngaphakathi kwengalo yakhe ahlale ebanga ukugubha yonke imigomo izikole zakhe.
Claudio Marchisio Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Izindaba zobuntu
Abadlali abasha abasha bebhola kubonakala ukuthi uBlaudio Mashiisio uletha emkhakheni wezemidlalo, umthwalo wangaphandle owuphawu lwesimo sakhe eTurin lapho esekelwe khona.
Uzolile futhi ubonise ukuvuthwa okuvelele kungakhathaliseki ukuthi uyini isimo. Ngenxa yalokho, akekho oye wathola isizathu sokuba nenkinga ngobumnene bakhe.
Ngaphezu kwalokho, irekhodi lakhe leminyaka ye-10 yempilo yomshado linokusho okuningi ngobuqotho bakhe obungalingani obubonakala ngokuzimisela kwakhe ukunikezela ubusha bakhe futhi kuqala kuJuventus ethuthuka ekuthiwa yi "Little Prince" eya "Prince".
Claudio Marchisio Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuqhathaniswa noMarco Tardelli
Kuyinto evamile ukuba abalandeli bebhola baqhathanise ibhola lezinyawo zabo zanamuhla nabadlali abafanayo abakhona esikhathini esithile, ukuthuthukiswa kwezinkanyezi zezinyawo zamanje ezenza ukuphikisa ngokusho ngokuhlonipha ukuthi ziqhathaniswa nobani.
I-Claudio ayiyona into ehlukile. Wayelokhu ebizwa ngokuthi uMarco Tardelli, oyisidlali esivelele esisebenza ngendlela efanayo ne-Claudio kwi-1970 kanye ne-1980 futhi wabelana ngejezi elifanayo.
Kodwa-ke, uClaudio usuqedile ukuqhathanisa ukuphikisa ukuthi isitayela sakhe sokudlala asihlangene noTardelli.
"Cha, angifuni ukuba nguTardelli. Ngifuna nje ukuba ngumdlali omuhle weJuventus futhi ngizibophezele kulokhu. "
Claudio Marchisio Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Isizathu ngemuva kwesidlaliso sakhe
UClaudio Marchisio uye waziwa ngezindlela ezimbili ezihamba phambili zezihloko eziphakeme. Siletha imininingwane mayelana namagama akhe omsebenzisi.
Ukuqala, waziwa okokuqala ngesidlaliso Il Principino ("The Little Prince") Ngabalingani bakhe abathandana nendlela ayegqoke ngayo futhi wazihlanganisa enkundleni yokudlala ngesikhathi sokuqala komsebenzi wakhe. Lesi sidlaliso sagcina sithandwa ngumdlali weqembu lakhe osekela ibhola uCladio Zuliani.
Njengoba isikhathi saguquka uClaudio Marchisio wathola isimo seqhawe phakathi kwabalandeli ababheka "The Little Prince"Ukuthi akuyona incazelo ephelele yomdlali wabo omangalisayo. Ngakho, waziwa ngokuthi "iNkosana".
Claudio Marchisio Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ezinye Amaqiniso
UClaudio Marchisio akabhemi futhi akakaze atshise ugwayi.
Uvotelwe uMdlali we-Juventus wonyaka ku-2009.
Uyaziwa negama lesidlaliso esithi "De Rossi waseTurin" ngenxa yesitayela esifanayo sokudlala kanye nesizinda sakhe somsebenzi yena uhlanganyela nomlingani wakhe wezwe UDaniele De Rossi of AmaRoma.
Wabizwa ngegama Serie A ithimba lonyaka kokubili i-2011 ne-2012.
UClaudio unento yokwenza ama-agent avela ezihlotsheni. Lokhu kubonakala yilokho uyise, uStefano Marchisio uyaqhubeka engummeli wamadodana akhe ngaleso sikhathi.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Claudio Marchisio Childhood Story kanye namaqiniso angama-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi!